Fikambanana Tononkalo Eran-Tany: ny andriambavilanitra no mitazona ny atsasaky ny lanitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2008 22:04 GMT
Amin'ny andro fifakalazana ny Andriambavilanitra eran-tany, y Kathy Ward avy amin'ny Rising Voices sy Nari Jibon dia nanome hevitra hoe ahoana moa raha mba anao fikambanana tononkalo eran-tany ao anatiny mpanao blaogy ny Rising Voices. Nomena erin-andro ny mpiblaogy anoratra tononkalo momba ny andriambavilanitra:
Tononkalo 10 no vaosoratra avy amin'ny Colombie, Bangladesh sy Madagasikara. Ireto telo reto no vaosafidin’ Kathy Ward sy ny namany mpanoratra tononkalo.
Paceñita / Cristina Quisbert
Tonga ny fotoana,
hijoroana ho any izay ilaina,
Tsy ny hitovizana fa ny laharam-pahamehana,
Hisokatra ny fo
Hiteny ny ao an-tsaina
Satria ny ilaina dia,
Ny kiaky indraindray dia masika,
Ny reny tsy afaka,
Ny reny afaka mandefitra,
Ny kiaky tsy afaka,
Ny vehivavy afaka manao an’ izany rehetra izany,
Miady na malahelo,
Tsy hiaritra ny tsy rariny intsony.
Tsy ho voatozana ao anaty ny rindrina hitsony.
Tonga ny fotoana anokafana ny maso sy ny sofina,
Tsy ny hitovizana fa ny laharam-pahamehana.
Women road repair crew, Kathryn Ward, Dhaka, 2004
I Poupoune , FOKO Toamasina, Madagasikara.
Voninkazo midoroboka mamirapiratra tahaka riva
Indray andro lasa izay, tsy mbola fantatra hoa oviana, dia nipoitra ny vehivavy, voary vita tamin'ny voan-tsiramamy, niravaka kofehim-bolamena ohatry ny fihetsiky ny fo, voary nitsonika niaraka tamin'ny teny izay nandrehitra azy avy tao anaty, ary izay nihanangatsiaka nanamafy ny rindrina, niaraka tamin'ny teny izay tonga taloha, teo anatrehiny.
Avy eo izy dia niseho sahala nirakotra tsara noho ny hoditra, fitafihiana mitondra fihetsem-po sy fitempon'ny fo. Nipohitra ary ny vehivavy, niaraka taminy ny hamamin'ny zava-bita amin'ny kaly izay tsy hita raha tsy ao aminy.
Ary amin'ny tononkalo farany dia i Sipakv, izay ray amin'ny mpitazona ny FOKO-Madagascar.
Jereo ity sakafo
Jereo ity trano mikorontana
Hafàna ny lalao fa miverina eto amin’ny sehatra koa i Lova ! Faly indray mamaky anao etoana 😀
09 Marsa 2008, 22:17
🙂 Mba hitondra anjara briky na briky malemy ary izany e !
09 Marsa 2008, 22:22